Muxuu Tababare Zinedine Zidane Ka Yiri Kulankii Ay Kooxdiisa Real Madrid Ku Hungowday Inay Jabiso Rikoorka Guulaha La Liga? - iftineducation.com
iftineducation.com – Muxuu Tababare Zinedine Zidane Ka Yiri Kulankii Ay Kooxdiisa Real Madrid Ku Hungowday Inay Jabiso Rikoorka Guulaha La Liga?
Zinedine Zidane ayaa aaminsan in Real Madrid ay aheyd kooxda fiican iyagoo ay barbaro 1-1 kala kulmay xalayto kooxda Villarreal.
Iyadoo laga joojiyay rikoorkii guulaha ee ay ku bilowdeen xilli ciyaareedka, waxa ay sidoo kale arkeen in laga horjoogsaday inay gaaraan guushii 17aad ee isku xigta ee La Liga oo noqon laheyd rikoor cusub.
Waxaana ay ka dhigeysaa inay barbareeyeen rikoorkii ay shan sannadood ka hor dhigtay kooxda Barcelona ee Pep Guardiola ee guulihii isku xigxigay ee La Liga.
Si kastaba, Zidane kama uusan xumeyn barbaraha, waxaana uu tilmaamay inaysan mar walba macquul aheyn in waqti danbe ciyaar walba la badiyo sida dhacday kulankii Sporting Lisbon ee Champions League.
Waxa uu shirkiisa jaraa’id ku yiri: “Qeybtii labaad waan badin karnay, laakiin qeybtii hore maya, ma aanan aheyn kuwa fiican.
“Kulan adag ayuu ahaa, waxaana gelinay dadaal badan, laakiin mararka qaar sidaan oo kale waa ay dhacdaa, waana ay soo dhacday.
“Waxaan gurigeena ku dhuminay labo dhibcood, laakiin ma bedeleyno sida aan wax u sameyneynay. Qeybtii labaad waxaan aheyn kooxda gacan sareysay, laakiin mar walba ma badin kartid daqiiqada ugu danbeysa.”
Doorashada Madaxweynaha oo laga yaabo inay dib uga dhacdo waqtigii loogu tala galay